'म निर्मला मलाई न्याय चाहियो' भन्दै नयाँबानेश्वरमा प्रदर्शन(फोटोफिचर), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
'म निर्मला मलाई न्याय चाहियो' भन्दै नयाँबानेश्वरमा प्रदर्शन(फोटोफिचर)
काठमाडौँ। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको आज १०० दिन पुगेको छ। तर हत्यारा भने अझैसम्म पनि पक्राउ पर्न सकेको छैन। निर्मलाको न्यायकै लागि भनेर धेरै सडक आन्दोलनहरु भएतापनि उनले न्याय पाउन सकेकी छैनन्।
निर्मलाको हत्या भएको सय दिनको अवसरमा शुक्रबार राजधानीको नयाँबानेश्वरमा प्रदर्शन गरिएको छ। प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरले निर्मला पन्तको हत्यारालाई चाँडो भन्दा चाँडो पक्राउ गरी कडा कारबाही गर्न समत माग गरे।
करिब दुई घण्टासम्म चलेको प्रदर्शनमा सरकारलाई लक्षित व्यङ्ग्यात्मक नाटक समेत प्रस्तुत गरिएको थियो।
प्रदर्शनमा पुगिसक्यो सय दिन अझै लागेन लाजघिन, म निर्मला मलाई न्याय चाहियो लगायतका नारा लेखिएको प्लेकाड समेत देख्न सक्न्थ्यिो। प्रदर्शनपछि द्धीप प्रज्वलन समेत गरिएको थियो।